Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Khaati Kataagan Mudaharaadadii Ay Fasaxday.
Itoobiya oo Khaati Kataagan Mudaharaadadii Ay Fasaxday.
Posted by Dulmane	/ August 18, 2018
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee caasimada wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ay sare ukaceen dibad baxyada ay dadwaynuhu kumuujinayaan rabitaankooda iyo diidmadooda, kuwaas oo sida lasheegay si joogta ah udhaca.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan wadanka kusii kordhaya mudaharaado waawayn oo qaarkood ay rabshado wataan kuwaas oo keena in ay iska horyimaadaan ciidanka amaanka iyo dibad baxayaashu.
Arintan ayaa kadambaysay kadib markii maamulka cusub ee Abiye Axmed uu fasaxay dibadbaxyada oo inta taariikhda la ogyahay wadankaas mabnuuc ka ahaa waxayna taasu keentay in dadwaynihii cabudhsanaa ay mudaharaado kala joojin waayaan.
Dadka shacabka ah ee Itoobiya kudhaqan ayaa dhankooda lagu eedeeyay in ay si xun uga faa’iidaysteen fursadii loosiiyay in ay mudaharaadi karaan waxaana lasheegay in dadwaynuhu ay dhaqan kadhigteen mudaharaado qaar badan oo kamid ah aan maamulka lagu diidanayn.
Shacabka Itoobiya kudhaqan oo waligood aan helin Xoriyada hadalka ayaa hada sida ay doonaan udhaqma kadib markii dibad baxyo aan loo ogolaanin ay bilaabeen sanadkii 2015, kuwaas oo kalifay in maamulkii Wayaanaha ee xiligaas talinayay uu daaqada kadago isla markaana lakeeno maamul rabitaanka qoomiyada Oromada kuyimid.
Dhinaca kale ciidamada amaanka ee Itoobiya ayaa lagu eedeeyay in meelaha qaar ay dadwaynaha ula dhaqmaan si aan fiicnayn iyagoo isku daya in ay xoog kukala eryaan dadka shacabka ah ee mudaharaada yaasha ah, waxaana lasheegayaa in ay jiraan dad kuwaxyeeloobay iska hor imaadka booliiska iyo dadwaynaha.
Sida aan lawada socono ciidanka mulatariga Itoobiya ayaa wadanka Ogaadeeniya kudilay dadbadan oo shacab ah kadib markii Mulatarigu uu xoog kugalay Gobolka, waxayna rasaas kufureen dad shacab ah oo kagadooday soogalitaanka ciidanka mulatariga.